Nampitambatra PA380 VC amin'ny A350 hamihina entana, azo atao?
fanontaniana Nampitambatra PA380 VC amin'ny A350 hamihina entana, azo atao?
1 taona 10 volana lasa izay #481 by JanneAir15
Salama! Aho alaina A350 mampiray entana sy Heveriko fa ny tsara indrindra A350 azonao FSX izao ankehitriny izao fa misy olona lehibe olana azy: manana mbola mitovy A320 / A330 toy ny cockpit, ary nieritreritra aho fa no azo atao mba hampifanaraka ny VC from Project Airbus A380 io fiaramanidina. Izany no mahatonga ny A380 VC satria no akaiky indrindra izay afaka (satria tsy misy A350 VCs). Koa afaka manampy ahy amin'izany? Efa nanandrana Tutorials sasany fa na inona na inona.
Ity ny A350 mampiray:
1 taona 10 volana lasa izay #484 by Gh0stRider203
Nataoko haingana Google fikarohana araka ny marina aho tsy nanao izany, dia niakatra niaraka ity lahatsary ity. Manantena aho fa manampy!
1 taona 10 volana lasa izay - 1 taona 10 volana lasa izay #485 by JanneAir15
Efa nijery aho fa ny lahatsary ary niezaka ny fomba nefa tsy niasa. Izany no mahatonga aho nanontany eto.
Yeah aho tonga any amin'ny famaranana fa tsy azo atao. Efa teny ny antontan-taratasy sy ny zavatra rehetra ilaina, fa tsy azo atao izany na ry zareo, izay ny lahatsary MDLXMDLH milaza fa Izaho efa nizaha toetra ny rehetra ary tsy misy azy ireo miasa izany no tena tsy fantatro izay tokony hatao. Fa raha misy olona afaka manao izany dia miasa masìna ianao, lazao eto ny fomba.
Last edit: 1 taona 10 volana lasa izay JanneAir15.
Fotoana mamorona pejy: 0.389 segondra